3 Sababood oo ah isticmaalka WordPress waa fikrad fiican | Abuurista khadka tooska ah
U beddel RGB midabka HEX
U beddel midabka RGB CMYK
U beddel midabka CMYK RGB
U beddel midabka HEX RGB
Astaamaha ASCII / HTML
3 Sababood oo ah isticmaalka WordPress waa fikrad fiican
Jose Angel | | Naqshadeynta Webka, WordPress
Isticmaalka WordPress waxay noqoneysaa mid caan ah maalin kasta, aamin ama ha rumaysan. In kastoo, dhammaanteen bilaabaya, waxaan dooneynaa bogga ugu xirfad badan. Tan waxaan u maleyneynaa inay jirto hal wado oo keliya: Naqshadeeye web. Waan ognahay ikhtiyaarkan inuu qaali yahay oo qof walba uusan awoodin. Shirkad u heellan boggeena internetka, waxay sameyneysaa eber iyo dayactir dambe. Xaaladdan oo kale waxaan dooraneynaa inaan u adeegsanno maamule kasta oo maareyn ah oo leh fikrad xun oo tan ah. Laakiin WordPress waa aalad aad u awood badan.
WordPress waa aaladda ugu isticmaalka badan ee wax lagu qoro. Laakiin ka fog halkaa, adeegsiga WordPress ayaa xallin kara ganacsigaaga noocuu doono ha noqdee. Ha noqoto dukaan, wargeys dijitaal ah sida Creativos Online ama 'tiyaatarka guriga' sida Netflix. Qodobkaan waxaan ku soo qaadaneynaa seddex sababood oo ah isticmaalka WordPress wali fikrad fiican.
1 Ka dhig waxaad u baahan tahay
2 Kaydinta lacagtu waa lagama maarmaan in la bilaabo
3 Ma u fiicantahay Google?
Ka dhig waxaad u baahan tahay
Bulshada WordPress waa weyn tahay waana sababta ay u soo jiidatay xiisaha dad badan ka kala yimid deegaanno kala duwan. Iyada oo fikrado cusub laga helay macaamiisha cusub, horumariyayaashu waxay ku ballaarinayeen fursadaha isticmaalka WordPress qaababka ugu lama filaanka ah. Qalabayntaas aan dhammaadka lahayn waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee WordPress u ku badan yahay- Ku darista astaamo dheeri ah, waxaad abuuri kartaa nooc kasta oo degel ah oo aad u baahan tahay. Xaaladda aadan awoodin inaad ku dhammaystirto hawshaada shirkadda weyn ee WordPress, hubaal waxaad ka heli doontaa fiilooyin ay kugula taliyaan bulshooyinka isticmaalaha abuuray. Kuwani waxay ku-hawlgalaan hawlo dheeri ah rakibiddaada oo dhammaystiraya isticmaalkeeda.
Waad abuuri kartaa gole ama xitaa shabakad bulsheed kuu gaar ah. Waxoogaa isbeddel ah, bartaadu waxay noqon kartaa laba-luqadle. Nidaamka tigidhada tikidhada dhacdooyinka 'WordPress' ayaa ka dhigi doonta iibinta tikidhada dhacdadaada neecaw. Xaqiiqdii ma jiraan wax xadidan oo aad ku gaari karto dulqaad yar., qaar ka mid ah raadinta wanaagsan ee google, iyo qalabka saxda ah.
Kaydinta lacagtu waa lagama maarmaan in la bilaabo
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, haddii aad rabto inaad wax ka bilowdo laakiin aan lacag badan ku qarashgareyn karin, adeegsiga WordPress waa talo soo jeedin guud. Kaliya maahan in WordPress gebi ahaanba bilaash yahay, sidoo kale waa ilo furan. Maxay taasi adiga kuu tahay? Waxay macnaheedu tahay bulshada sii kordheysa ee had iyo jeer ka shaqeysa iyada. Dadka ka baxsan maamulka WordPress waxay ballaariyaan aqoontooda iyo horumarkooda si altruistically ah. Taasi waa sababta noocyo cusub, cusbooneysiin, hagaajin iyo waxyaabo lagu daro marwalba loo heli karo. Interface A runtii fudud oo dareen leh. Waxaa loo kala saaray qaybo kala duwan khaanad tilmaamaysa magacyo shaqooyinka aad ku qaban karto mid kasta oo ka mid ah.
Abuuritaanka goob aasaasi ah uma baahna khibrad ama aqoon, isna si dhib ah uma haysto waqti. Haddii aad maskaxda ku hayso mashruuc gaar ah oo dhab ah, dhib ma aha sidoo kale, laakiin waa inaad aqoon yar ka sii leedahay. Waxaa jira kumanaan (hadaanay ahayn malaayiin) mawduucyo bilaash ah oo loo heli karo isticmaal kasta maskaxda ku hay, tiraduna si joogto ah ayey u sii kordheysaa.
Haddii waxqabadka qaarkood aan lagu hirgelin webka aad ku sameyso wordpress oo aadan haysan aqoon kugu filan oo aad ku barnaamijiso, waxaad ku rakibi kartaa fiilooyin bilaash ah ama lacag leh si aad si fudud ugu guuleysato. Waxaa intaa dheer, had iyo jeer waxaa jira taxane ah waa inuu lahaadaa plugins loogu talagalay WordPress kaas oo noqon doona caawimaad weyn markaad bilaabeysid sameynta boggaaga ama bartaada internetka.
Tan awgeed, casharro badan oo YouTube-ka ah ayaa la heli karaa. Dhisida degelkaaga adoo adeegsanaya waxyaabo bilaash ah ayaa kuu badbaadin kara lacag badan.
Ma u fiicantahay Google?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka yar ee la yaqaan, laakiin aad ayey muhiim u tahay in WordPress uu ku leeyahay barnaamijyada kale, ayaa ah inay sifiican ugusocoto Google. Darajo wanaagsani waa muhiim, maaddaama ay tahay ganacsi isku dhafan, wixii caawimaad ah waa la soo dhaweynayaa. Waa wax caqli gal ah hadii aan waqtigeenna iyo maalkeenna gelino waxaan rabnaa inay ahaato si ay uga hesho soo jiidasho wanaagsan dadweynaha. Marka waxaan dadaalkeena oo dhan uga dhigi karnaa mid faa iido leh. Ugu horreyntii, WordPress waxaa loo qoray qaab u fududeynaya mashiinnada raadinta inay akhriyaan oo ay darajo yeeshaan, mahadsanid koodh fudud. Marka labaad, iyada oo sahlanaanteeda la adeegsanayo, way u fududahay isticmaalka WordPress in si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
Sababahan fudud awgood, waxaa iska cad in adeegsiga WordPress uu sahlayo howsha dad badan. Oo haddaad wali ka shakisan tahay awooda ay u yeelan karto ganacsigaaga, fiiri tirakoobka shabakadda baloogyada Blog, oo lagu sameeyay WordPress.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » 3 Sababood oo ah isticmaalka WordPress waa fikrad fiican
Masuul ka ah xogta: Miguel Ángel Gatón
Heshiis weyn oo ku saabsan xirmada biyo-biyoodka qurxoon - badbaadi ilaa 68%
7 plugins oo bilaash ah si loo dhamaystiro sawirkeena
Ka hel wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya Creativos Online e-maylkaaga